နေ့များ: တိတ်ဆိတ်မှု၊ ခန္ဓာကိုယ်မှတ်ဥာဏ်၊ နေရာ
တိတ်ဆိတ်မှု၊ ခန္ဓာကိုယ်မှတ်ဥာဏ်၊ နေရာ
ဖြေ။ ။​ ကျမတခါက “Discourse on the logic of language” ကဗျာကိုတခြားအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်နဲ့ ဖတ်ကြည့်ဖူးတယ်။ တယောက်က ဥရောပနောက်ခံကနေဒါသူ၊ ။ နောက်တယောက်က အန္ဒိယမျိုးနွယ် ကနေဒါသူ (First Nations Woman။ မှတ်ချက်။ ကနေဒါမှာ အာရှဘက်၊ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယအနွယ်ဘက်ကလာတဲ့ သူတွေကို East Indian လို့သုံးပြီး၊ ကာရေဘီယံဘက်ကလာသူတွေကို West Indian လို့သုံးတယ်)။ ဖတ်ပြီးတော့ လူဖြူအမျိုးသမီးက အာဖရိကန်တွေကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားမပြောဖို့ တားမြစ်ထားတာအတွက် တော်တော့်ကိုစိတ်ကသက်မသာဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုခံစားရတာဟာ သူ့အတွက် အရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာလို့တော့သူနားလည်သွားတယ်။
လူမည်းအမျိုးသမီးကတော့ ဦးနှောက်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဖော်ပြတဲ့အပိုင်းကိုဖတ်ရတော့အတော်တုန်လှုပ် သွားမိတယ်လို့ပြောတယ်။ အခန်းတခန်းမှာ ၁၉ရာစု ဆရာဝန်နှစ်ယောက်က အာဖရိကန်တွေ၊ တခြားအသားအရောင်နဲ့လူမျိုးတွေ၊ မိန်းမတွေဟာ လူဖြူယောင်္ကျားထက်အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျတယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်။ ဦးနှောက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတခုက ခုလိုလက်ခံထားတဲ့အသိဟာ ကျမတို့ပြောစကားကို ထိန်းချုပ်တယ်။ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောခွင့်မရဘူး၊ မပြောရဲဘူး။ ကျမတို့ (အာဖရိကန်မိန်းမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အန္ဒိယမျိုးနွယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူမည်းမိန်းမတွေ) ဟာဘယ်တုန်းကမှ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ဘ၀ ကိုထိမ်းချုပ်ဖို့ သတ်မှတ်မခံခဲ့ရဘူး (မှတ်ချက်။ ကိုယ့်ဦးနှောက်ပေးတဲ့အသိကိုက ငါတို့ဟာလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အဖြည့်ခံတွေပဲ၊ ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ်ဖန်တီးဖို့ ဆိုတာငါတို့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလို့ ကိုတွေးထင်နေတာမျိုး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းကလည်းသူတို့ကိုဒီလိုပဲမြင်နေတာမျိုးကို ဆိုချင်ပုံရသည်)။
ဒီနမူနာကို ကျမအစာစားတဲ့ဘက်ကိုလှည့်ယူကြည့်မယ်။ ကျမတို့ဖွံ့ဖြိုးဆဲကမ္ဘာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတော်တော် များများဟာ အနောက်ရဲ့စားသုံးမှုကိုခံရတယ်။ ပါးစပ်ထဲ၊ လည်ချောင်းထဲကတဆင့်ဝမ်းဗိုက်တွေထဲအထိ ရောက်သွားတယ်။ အဲဒီမှာအစာချက်ပြီးမူရင်းအတိုင်းမဟုတ်တဲ့တုပထားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတခုပုံစံပြောင်းပြီး ပြန်ထွက်လာတယ်။ ပြီးတော့ ကမ္ဘာ့ဂီတဆိုပြီးတံဆိပ်တခုကပ်ပြီးထွက်လာတဲ့အခါ ဒီထုတ်ကုန်ဟာ မူရင်းဇစ်မြစ်ကနေလွဲထွက်သွားတော့တယ်။ ဒီတော့ ခုလိုအစာကြေညက်ဖို့လိုနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာစားသုံးမှုကို ခက်ခဲအောင်လုပ်ထားတာဟာ တန်ဖိုးထားသင့်တဲ့အရည်အချင်းတခုလို့မြင်မကြည့်နိုင်ဘူးလား။
မေး။ ။ ခင်ဗျားဟာ သမိုင်းနဲ့ မှတ်ဥာဏ်ကိုတခါထက်မကပြောခဲ့တယ်။ ခုခင်ဗျားသမိုင်းကိုပြောပြနိုင်မလား။
ဖြေ။ ။ ဒါကျမသမိုင်းသက်သက်မဟုတ်ဘူး။ ရှင့်သမိုင်းဆိုလည်းဟုတ်တယ်။ ရှင်လက်ခံမလား ဒါကျမတို့သမိုင်းပဲ။
မေး။ ။ ဒါဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့သမိုင်းကိုပြောပါဦး။ ခင်ဗျားအရေးအသားပေါ်ဘယ်လိုသြဇာ သက်ရောက်ခဲ့သလဲ။
ဖြေ။ ။ တယောက်ယောက်ကကာရေဘီယံမှာရှိတဲ့ အာဖရိကရဲ့ပေါက်ကွဲပွင့်ထွက်နေတာကိုဘယ်လိုရေးမလဲ။ ဘယ်သူရေးနိုင်မလဲ။ ပထမ တိတ်ဆိတ်မှုကိုသိမှတ်ပြုရမယ်။ စကားလုံးတွေအားလုံး၊ ပြီးတော့ ကျန်နေခဲ့မယ့်တိတ်ဆိတ်မှု။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေက ဒါကိုတောင်းဆိုနေလို့ပဲ။ ဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့မှုတွေကိုအရိုအသေပေးတဲ့ပုံစံတခုအနေနဲ့ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ စာရေးဆရာတယောက်အနေနဲ့ ကဗျာဆရာတယောက်အနေနဲ့ လှုံ့ဆော်မှုကအမြဲ စကားလုံးတွေဆီမှာရှိနေတယ်။ မေးခွန်းက ရှင် သဲထိတ်ရင်ဖို သမိုင်းတခုကို လှလှပပလေးဖြစ်အောင်ရေးမှာလား။ စားသုံးလို့လွယ်ကူတဲ့အလှအပ တခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးလိုက်မှာလား။ ကျမကတော့ ဒီကျွန်စံနစ်နဲ့ပါတ်သက်လို့ အဆင်ပြေအောင်၊ဖတ်ပျော်ဘွယ် ဖြစ်အောင်ရေးထားတာတွေတွေ့ရင် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မိတယ်။ ဘာသာစကားနဲ့ဆွဲဆောင်ဖွယ်ဖြစ်အောင် ရေးထားလေ၊ ရာစုနှစ်နဲ့ချီရှိခဲ့တဲ့မယုံကြည်မှုမျိုးနဲ့ ဘာသာစကားအပေါ်အယုံအကြည်မဲ့လေပဲ။ ဒါပေါ့လေ တဘက်မှာတော့ သက်တောင့်သက်သာရှိလိုတဲ့ စာဖတ်သူတို့ ဈေးကွက်တို့လို ထဲ့တွက်ရမဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကလည်းရှိနေတယ်ပေါ့။
မေး။ ။ ဒီတော့ ခင်ဗျားကိုယ့်ပြဿနာကိုယ်ရှာသလိုဖြစ်မနေဘူးလား။ ခင်ဗျားပဲ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လိုချင်တယ်ပြောခဲ့တယ်မလား။
ဖြေ။ ။ စာရေးသူတိုင်းဒါကိုလိုချင်ကြတာပဲ။ ပြဿနာက ဒီပရိတ်သတ်ကိုရဖို့ ဘယ်လောက်အလျှော့ပေးဖို့လို မလဲဆိုတာပဲ။ ကျမအတွက် စိန်ခေါ်မှုက ဘာသာစကားကခွင့်ပြုထားတဲ့ဘောင်ထဲကနေ ကျမဘယ်အထိပြောနိုင်မလဲ ဘာတွေပြောလို့မရနိုင်ဘူးလဲ ဆိုတာကွဲပြားဖို့ပဲ။
မေး။ ။ ခင်ဗျားဘာလို့မပြောနိုင်ဘူးလို့ ပြောရတာလဲ။ ကျနော့်အမြင်မှာ ခင်ဗျား….အဲ.. ခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းဆို ကမ္ဘာသစ်ထဲကကျနော်တို့သမိုင်း ပဲမဟုတ်ဘူးလား။ ဒါကို ခင်ဗျား “ Discourse …….” မှာ ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လား။
ဖြေ။ ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒါဟာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားထဲမှာဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ပြင်သစ် သို့ စပိန် ဘာသာစကားထဲမှာဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာကျမအတွက်သူစိမ်းဖြစ်နေတဲ့ တခြားဘာသာစကား တခုထဲမှာဖြစ်ခဲ့တာ။ ဒီတော့ကျမဘယ်လိုရေးမလဲ။ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ ဖြစ်နေတာ၊ ဖြစ်ပြီးသွားတာတွေဟာ စကားလုံးတခုနဲ့တခုကြားက ကွက်လပ်တွေထဲမှာ၊ ကျပ်ညပ်ပြီး ထူပိန်းနေတဲ့ စကားလုံးတွေကြားထဲမှာ၊ စာကြောင်းတွေကြားထဲမှာ။
မေး။ ။ ကိုယ့်သမိုင်းပြန်ရေးဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ ခင်ဗျား ပြောနေတာလား
ဖြေ။ ။ ဟုတ်တယ်။ ရှေးရိုးအရလက်ခံထားတဲ့ သမိုင်းဆိုတဲ့နားလည်မှုကို မှတ်ဥါဏ်ကလက်ခံထားတဲ့အတိုင်း ပြန်ရေးဖို့။
မေး။ ။ ဒါဆို ဒီနှစ်ခုကိုတခုနဲ့တခုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်လို့မြင်နေတယ်ပေါ့။
ဖြေ။ ။ ရှင်ကောမမြင်ဘူးလား။ မှတ်ဥါဏ်တွေအများကြီး၊ တချို့ကအားလုံး၊ တချို့တွေကမပြည့်မစုံနဲ့။ ဒါပေမဲ့မှတ်ဥာဏ် တခုလည်းပဲရှိနေတယ်။ တခုတည်းသောမှတ်ဥာဏ်။ ဆုံးရှုံးမှု၊ အဆုံးအရှုံး။ ဆုံးရှုံးမှု၊ အဆုံးအရှုံး။ ဆုံးရှုံးမှု၊ အဆုံးအရှုံး……။ ဘာမှမရှိခြင်း ရှင်သဘောတူမလား။ တိတ်ဆိတ်မှုအပြင်ဘက်က ကဗျာကိုရေးဖွဲ့ဖို့။
မေး။ ။ ကျနော် ခင်ဗျားပြောတဲ့ အသံတခုထက်ပိုပြီးပြောနေတဲ့ကဗျာတွေကိုခင်ဗျားဘယ်လိုဖတ်တယ်ဆိုတာ ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။
ဖြေ။ ။ နှစ်တွေတော်တော်များများ ကျမဟာ လွယ်လွယ်ကူကူပဲ အသံတမျိုးပဲပေးတဲ့ ကဗျာတွေကိုပဲ ဖတ်ခဲ့မိတယ်။ တချိန်မှာကျောင်းသားတယောက်က ကျမကို “Universal Grammar” (She tries ……ထဲမှ) သူ့ကိုဖတ်ပြဖို့လာပေးတယ်။ မင်းငါနဲ့တူတူဖတ်ရင်ငါလည်းဖတ်တာပေါ့လို့ကျမလည်းပြန်ပြောမိတယ်။ အဲဒီမှာ ကျမသဘောပေါက်လာတယ်။ ကဗျာဟာကျမကြိုတင်တွေးထားသလိုမဟုတ်ဘဲ တခြားနည်းလမ်းတခုနဲ့လည်း အောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်ဆိုတာ သိမြင်သွားခဲ့တယ်။ ကျမ၀န်ခံသင့်တာတခုက “She tries ……..” နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ကျမ နားလည်သိမြင်မှုအတော်များများကို ဒီလက်ရာတွေဖန်တီးပြီးမှသာရခဲ့တယ်ဆိုတာပဲ။ ရှေ့မှာကျမပြောခဲ့ပါတယ်၊ ကဗျာရဲ့ပြေပြစ်စီးဆင်းနေတဲ့အသံကို ကျမဖျက်ပစ်ချင်မိခဲ့တယ်ဆိုတာ။ လူမည်းတယောက်အနေနဲ့၊ မိန်းမတယောက်အနေနဲ့ ကိုလိုနီပြုခံရတဲ့အရာဝထ္ထုတခုအနေနဲ့ ငါ့ကြမ္မာငါပိုင်စိုးမှု ဟာဘယ်ကလာတာလည်း၊ ဒါဟာတကယ်ကောလိုအပ်သလား။ တခုခုကိုဖွင့်ထုတ်ပြောဆိုဖို့၊ လူထုပရိတ်သတ်ကိုငါ့အသံဖွင့်ဟပြောဆိုနိုင်ဖို့။ ဒါတွေဟာတကယ်ကောလိုအပ်လို့လား။ ယောင်္ကျားမဟုတ် လူဖြူမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းတည်ဆောက်ခွင့်တောင်မရှိပဲ ကဗျာရေးဖို့ကောလိုလို့လား။ ငါတကယ်တခုခုပြောနိုင်ရဲ့လား။ ငါပြောနိုင်တာတိတ်ဆိတ်မှုတခုပဲလား။
ကျမကိုယ်တိုင်ကြိုမသိထားပဲ မင်းငါနဲ့တူတူဖတ်ရင်ငါလည်းဖတ်တာပေါ့ လို့ပြောခဲ့တာဟာ ကဗျာရဲ့အသံကိုပြောင်းလိုက်တာပဲ။ အနဲဆုံး အဲဒီစာမျက်နှာကိုတခြားအသံတွေနဲ့ တခြားသမိုင်းတွေနဲ့ ဝေမျှလိုက်တာပဲ။ ဗဟိုကနေစီးခိုင်းလိုက်တယ်။ နေရာလွတ်တခု ရှင်းပေးလိုက်တယ်။ ကျမဟာ တခြားအသံတွေကိုကြားခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ အသံစုံ စကားစုံ တီးတိုးစကားသံပြိုင်၊ အမျိုးသမီးတွေစု စကားပြောနေတာနဲ့ဆင်လာတယ်။ ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ အော်သံနဲ့ပဲ့တင်လိုဖြစ်လာတယ်၊ ပြီးတော့စာသားတွေဟာ ဂျက်ဇ် စာသားတွေနဲ့တူနေမယ်။ ရှင် “Discourse ……” ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် အလယ်မှာပြန်ကျော့ထားတဲ့ အပိုဒ်ဟာ အဓိကတေးသွားဖြစ်ပြီး အနားမှာဝန်းရံနေတဲ့ဘာသာဗေဒဖြစ်ရပ်တွေကို ဂျက်ဇ်မှာသုံးတဲ့ အပိုဒ်တိုလေးတွေလိုမြင်ကြည့်နိုင်မယ်။ ဘာသာစကားတခုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုဖွဲ့ဆိုထားတာပေါ့။
မေး။ ။ ကျနော်ပထမမေးခွန်းကိုပြန်သွားရဦးမယ်။ ခင်ဗျားဒီပြဿနာတွေကိုရေးဖွဲ့တဲ့နေရာမှာ…….
ဖြေ။ ။ ကျမ ကဗျာရေးတဲ့အခါ ပြဿနာတွေကိုမရေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတယ်။
မေး။ ။ ဒါဆိုခင်ဗျားဘာကိုကြိုးစားပြီးရေးသလဲ
ဖြေ။ ။ တချို့အတွေ့အကြုံတွေရဲ့အမှန်တရားကိုသာရေးတာပါ။
မေး။ ။ မေးခွန်းကဖြေဖို့ ကျန်နေတုန်းပဲ။ ခင်ဗျား တခုခုကိုရေးတဲ့အခါမှာခင်ဗျားမျှဝေချင်တဲ့ပရိတ်သတ်တော့ စိတ်ထဲမှာရှိနေလိမ့်မယ်လို့ကျနော်ယူဆတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီပြဿနာတွေ ဒါမှမဟုတ် အဲဒါတွေကိုခင်ဗျားချဉ်းကပ်တဲ့ အခါမှာ တွေ့နေရတဲ့ပုံစံက………… (စိတ်ထဲမျှဝေချင်တဲ့ပရိတ်သတ်တော့ရှိပြီး ရေးချလိုက်တဲ့အခါ ရှုတ်ထွေးလွန်းတဲ့အရေးအသားတွေဖြစ်နေတော့ကိုယ်ပေးချင်တဲ့အချက်ကိုပရိတ်သတ်ကကောရပါ့မလားဆိုတာကိုမေးချင်ပုံရတယ်)
ဖြေ။ ။ ရှင် ကကျမရေးဖွဲ့ပုံရဲ့ ရှုတ်ထွေးပြီးနားလည်ရခက်တာကိုပြန်ပြောချင်ပြန်ပြီ ထင်တယ်။ ဟုတ်တယ်မလား။ ဒီကြားထဲကကွာဟမှုကိုကျမဘယ်လိုစေ့ပေးရမလဲ။ ကျမ၀န်ခံပါတယ်။ “She tries …..” ကိုရေးပြီးတဲ့အခါ သိလာတာတခုက စာမျက်နှာပေါ် တခုပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ ကျမနောက်ထပ်တခုကိုလည်း ပြီးဆုံးအောင်လုပ်ပေးရဦးမယ်ဆိုတာပေါ့။ အဲဒါ အသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှု (Performance) ပဲ။ ကျမယုံကြည်တာက ကာရေဘီယံ အနုရသရဲ့ အရမ်းအရေးပါတဲ့အချက်တခုဟာ အသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှု ပဲ။ ကဗျာတွေကိုသက်ဝင်စေမယ်။ စာသင်ခန်းတခုထဲမှာသူတို့ကိုရွတ်ဆိုတဲ့အခါ ကွဲပြားတဲ့ နားလည်မှုနဲ့ခံစားမှုတွေ၊ မှန်ကန်မှုအသစ်တွေထွက်လာနိုင်မယ်။ ကျမနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက် ကဗျာတွေကိုအတူဖတ်ခဲ့ကြသလိုမျိုးပေါ့။
မေး။ ။ ခန္ဓာကိုယ်ဟာကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတခုအနေနဲ့ဝင်ရောက်သရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပါတော့။
ဖြေ။ ။ မှန်တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ မျှော်လင့်မထားတဲ့ပုံစံတမျိုးမျိုးနဲ့ပွင့် ထွက်ပြီး She tries… ထဲကစာသားတွေထဲ ၀င်သွားဖို့လိုမယ်။ အာဖရိကန်ခန္ဓာကိုယ်ဟာကမ္ဘာသစ်ထဲ ထိုးသွင်းခံခဲ့ရသလိုလေ။ အာဖရိကန်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့။ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးသုံးရရင်တော့ ကမ္ဘာသစ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်မှုပေါ့။ အာဖရိကန်တွေဟာ ကမ္ဘာသစ်ကိုခန္ဓာကိုယ်တခုတည်းနဲ့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲပဲသူတို့ဆက်လက် ရှင်သန်ဖို့လိုအပ်တာတွေအားလုံးထဲ့သွင်းသိုမှီးခဲ့ကြတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှတ်ဥာဏ်ပေါ့ ရှင်သဘောကျတယ်မလား။ နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ လောက်အင်ပါယာရဲ့လူမဆန်မှုကိုကြံ့ကြံ့ခံခဲ့ရတဲ့ လူမည်းခန္ဓာကိုယ်တွေပေါ့။ တကယ်တော့ အင်ပါယာနဲ့အစွမ်းကုန်ဖိနှိပ်ခံရမှုကြား တခုတည်းထဲရင်ဆိုင်ရပ်တည်ခဲ့ရတဲ့ လူမည်းခန္ဓာကိုယ်တွေပေါ့။ သမိုင်းကိုလှပစွာပုံဖော်ဖို့ ဒီမှတ်ဥာဏ်ကိုဖျက်ပစ်တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ပစ်တော့မှတ်ဥာဏ်လည်းပျက်ပြယ် သွားရမယ်လေ။
မေး။ ။ ခင်ဗျားစာအုပ်ကို ကနေဒါမှာဘယ်လိုလက်ခံကြသလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျမ ကနေဒါကိုနေရာတခုအနေနဲ့ရွေးခဲ့တာပါ။ နေရာတခု ဒါ ကနေဒါပေါ့။ ကျမစာအုပ်တွေဖြစ်တဲ့ She tries ……… နဲ့ Looking for Livingstone တို့ဟာ ကနေဒါလိုနေရာမျိုးမှာသာရေးလို့ရနိုင်မှာမို့ပါ။
မေး။ ။ ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောနိုင်ရတာလဲ
ဖြေ။ ။ အာဖရိကန်အမေရိကန် ယဉ်ကျေးမှုကအားကောင်းတဲ့ အမေရိက မှာဆိုရင် အာဖရိကန်ဟာ ကာရေဘီယံဟာ ဒါဏ်ရာတခုပဲလို့ပြောချင်တဲ့ ဒီလိုအနုပညာမျိုး ကျမ ဖန်တီးနိုင်ပါ့မလား သံသယရှိမိတယ်။ အင်္ဂလန်မှာဆိုလည်းဒီလိုအတားအဆီးမျိုးရှိနိုင်တာပဲ။ အင်ပါယာနဲ့ ဓနသဟာယ ဆိုတာကရှိနေတယ်လေ။ ကနေဒါမှာပဲကျမလိုချင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးရှိနေတယ်။ အခြေအနေအားလုံးဟာ ပျက်စီးပြီး တွင်းနက်ကြီးတခုထဲစုပ်ယူပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့အန္ဓရာယ် မျိုးရှိတယ်လို့ခံစားကြည့်နိုင်တယ်။ ယူအက်စ် နဲ့ အင်္ဂလန်မှာက အာဖရိကန်ယဉ်ကျေးမှုကို ညှိယူဖို့လုပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကရှိနေခဲ့တယ်။ ကနေဒါမှာကြတော့ တောင်ပိုင်း အွန်တာရီယို နဲ့ မာရီတိုင်းမ် တွေမှာလွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲကာလလောက်က လုပ်ခဲ့တာတချို့ကလွဲလို့ ဒါတွေမရှိဘူး။ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ ဆိုပြီးထဲ့သွင်းပြောဆို နိုင်တဲ့အခြေကျပြီးသား အာဖရိကန်အလေ့အထတချို့ကလွဲရင် ကနေဒါရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာ အာဖရိကန်ယဉ်ကျေးမှုကိုထဲ့သွင်းပေါင်းစပ်ပေးဖို့အထိ တည်ငြိမ်မှု ရင့်ကျက်မှု မရှိသေးဘူး။ ဒီတော့ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံယှဉ်တွဲတည်ရှိခြင်းရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကို မကြာခဏပညာပေးပြောဆိုနေကြတုန်းပဲ။ လူဖြူအခွင့်ထူးခံလူ့အဖွဲ့အစည်းတခုအဖြစ်ရှိနေတုန်းပါပဲ။
ဒီလိုဆိုပေမယ့်လို့ တဘက်မှာ ကျမစာတွေကို အဖွဲ့အစည်းတချို့မှာသင်ကြားတယ်လို့ကြားရတော့ ကျေနပ်မိပါတယ်။ ကျမစောစောကပြောခဲ့သလိုပေါ့။ ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ပစ်တာဟာမှတ်ဥာဏ်ကိုပါ ဖျက်ပစ်တာပါပဲ။ သီးခြားအရည်အသွေးတွေနဲ့ ဒီလူမည်းခန္ဓာကိုယ်ဟာ လူဖြူတွေရဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ ကနေဒါ မှာရှိနေတယ်။ ဒါဆို မှတ်ဥာဏ်ဟာပျောက်ပျက်မသွားဘူးပေါ့။
Assembling Alternatives: Reading Postmodern Poetries Transnationally. Wesleyan University Press 2003 စာအုပ်မှ Interview with an Empire by M. NourbeSe Philip အခန်းကို ဆီလျှော်အောင်ပြန်ရေးပါတယ်။
Posted by KZကေ at 23:59